Vaovao - Toby fitehirizana solika vonjimaika ho an'ny harena ankibon'ny tany sy ny fambolena
Ny tanky fitehirizana solika azo rava dia fomba mahomby amin'ny fitahirizana ranon-javatra betsaka ao amin'ny toeram-piompiana solika na toerana fitehirizana lehibe. Taterina mihodinkodina ary mora apetraka, ny fiara mifono vy mora ampiasaina dia safidy tsara ho an'ny fitahirizana solika vonjimaika mandritra ny asa fitrandrahana, fanamboarana fantsona, hetsika miaramila, sy ny maro hafa.
Tanky azo harodana ho an'ny toeram-piompiana solika
Ny tanky fitehirizana ranon-javatra mirodana dia manome tombony maromaro amin'ny fiara mifono vy henjana kokoa. Anisan'ny tombony ny:
Large Capacity: Ny fiara mifono vy dia azo atao amin'ny tanjaka hatramin'ny 210.000 galona, ​​mamela ny fitahirizana lehibe amin'ny vidiny mora kokoa.
Fametrahana haingana sy fametrahana: Ny fiara mifono vy malefaka dia alefa mihodinkodina, mba hahafahanao mahazo betsaka amin'ny fotoana iray ary manomboka haingana ny tetikasanao. Ny fametrahana haingana azy ireo koa dia nahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny toe-javatra maika.
Toetrandro midadasika: Ny fitoeran-tsolika fitehirizana solika vonjimaika dia natao hahatohitra ny toetr'andro isan-karazany.
Misy mombamomba avo na ambany: Miankina amin'ny fampiharanao, ny fiara mifono vy dia vita amin'ny endrika avo na ambany mba hanampiana amin'ny filanao.
Apetraka ao anaty firafitry ny toeram-pambolena solika ireo tankina azo harodana araka ny hita amin'ny endrika santionany etsy ambany. Apetraka manodidina ny tsipika misy solika izay mifandray amin'ny tsirairay amin'ireo fiara mifono vy ireo.
Raha mila fanazavana fanampiny na famolavolana tanky hafa, tongasoa amin'ny mailaka izahay rdflexitank@126.comna antsoy ny 86-13589398394! Faly kokoa izahay miara-miasa aminao amin'ny tetikasanao manokana ary mitady endrika mety aminao.
Fitahirizana ondana moramora